“Too’anna Da’umsaaf Koriyaan Itophiyaa Gargaaruufi” Oromoo waan tuqu qabaa laata? – Gubirmans Publishing
Posted on August 24, 2014 by bgutema
Bara durii duriitii kaasee madaala uumaa, lafa, diinagdee fi kan dhimma itt bahanii eeguuf falli too’annaa da’umsaa shakalama ture. Sun madda qabeenyaa yaraa hirmachuu, fayyaa haadhaa fi ilmoo eeguu fi akka karoora fascistootaatt immoo qulqullummaa sanyii eeguuf gargaara jedhameetu. Jaalalli Oromoon ijoolleef qabu hammana hin jedhamu. Oromoon yeroo hunda ijoollee guddifachuuf qophee turani. Warri Oromoo naannichaaf akka galma qaallota jara lixaa bakka ijoollee hin barbaadamne itt gatanii ture. Ijoollee godhatanii fi guddifatan gidduu sanyiin haa ta’uu ogooman fanfanuun hin turre. Taadhomni eebba Waaq karaa Ateetee dhufutt amanama. Dhabduun taadhomuuf Ateetee yoo kadhattu kan ilmoo argatan karaa see Waaqa faarfatu. Ilmoon dhalachuun gammachuu addaa warraaf yoo fidu dhabduuf mararfannoo argamsiisa. Dhabuu, salleessuu kkf karaa Uumaan baayyina namaa itt to’atu keessaa hamma tokko. Namooti yeroo ilmoo guddisuuf hin qophoofne saala lagatu turani. Humnaan taadhoma dhaabuun hin beekamu ture.
Si’ana sabi Oromoo dhukkuba daddarbu, busaa, balaa uumaa akka bubbee roobaa, beela, dhukkuba taraa fi kkfnin dorsifamaa jiraa. Oromo garri caalu, Uumaan ilmoo abbaa barbaadu kennee kan hin barbaanne waan dhowwatuuf eenyuu hojii saa keessa seenuu hin qabu jedhu. Garuu hawaasi ammayyaan dilormaan (lakkoofsi namaa) hammaa bahuun lafaa fi wanti ittiin jiraatan hanqachuu danda’a jedhanii yaadda’aa jiru. Kanaaf mala adda addaa ittiin da’umsa too’atan, akka laguu, qaama ofii dhaggeeffachuu fi danqaa adda addaatt dhimma bahuu yaada kennuu. Hindiin addunyaa keesssaa biyyoota dilorma gudaa qaban keessaa isa lammafaa ture. Imaammati maseensaa Indiraa Gaandii waca guddaa akka kaasee fi dhuma irrati kufaatii seef kaasaa tahuun ni yaadatama. Karaa biraa mmoo utuu mootummaan keessa hin seenin dilormaan biyyoota hedduu misanii gadi guddachuun 0 % gad darbuu fi yartuu qofti “taadhoma bakka buusaa” kan jedhamu (dubartiin ilmoolee akka baayyinni dilormaa gadi hin buune qofa taasisu itt godhatan) keessa akka jirantu mullata. Hamma yoonaa imaammata warraa biyyoota misanii duuba madaala sanyii fi gitaa eeguuf dira’inni jiraachuu dhiisuu dhugaatt hin beekamu. Garuu kan Itophiyaaf mamii sirinyaa qabna.